पुष्टिएकी सेक्सी बहिनीलाई चिक्दा - Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » पुष्टिएकी सेक्सी बहिनीलाई चिक्दा
मेरी बहिनी अति सेक्सी थिइ। सलक्क परेको ज्यान, पुट्ट स्तन। एक्लै हुँदा बहिनीलाई सम्झदै छोल्ने गर्थेँ। उसको नजिक हुँदा पुरा सास तानेर उसको बास्ना लिन मनलाग्थ्यो। सेता तिघ्रा, कामुक ओठ, अनि चिकन दाई भने झै उसका आँखा हुन्थे।
उसको पुठो यस्तो मिलेको थियो कि ध्यान त्यतै मोडिन्थो। टिसर्ट लगाउँदा उसको दुधको टुप्पो बाहिरै आउला झै गर्थ्यो। काकी त्यस्तै हट थिइन। नुहाउँदा बाथरुम बाहिरको धारामा पेटिकोटले स्तन छोपेर नुहाउँथिन। पेटिकोट माथी सार्नाले सेता चिल्ला तिघ्रा देखिन्थे। नुहाएको थाहा पाएपछि म काकीको घर पुग्थे। हेरेर मज्जा लिन्थे। बहिनी भर्खर १४ पुगेकी थिइ।
मेरो घरमा आइरहन्थी। म उसको मा जान्थे। कट्टु र समिज लगाएर बसेकी हुन्थी। भर्खरका स्तन उ म तर्फ ढल्कदा स्पष्ट देखिन्थे। मैले उसलाई हस्तमैथुनको कुरा गरे। लजाइ पहिले, अनि गरेको छैन भनि।
एक दिन दिउँसो मेरो घरमा आइ। म घरमा एक्लै थिएँ। कालो लुगा लगाएकी थिइ। थाइ पुरै देखिने गरि। सरासर मेरो कोठामा आइ। अति सेक्सी देखिएकी थिइ। म रेडियो सुन्दै खाटमा सुतेको थिए। खाटको अर्को छेउमा बसी अनि संगै रेडियो सुन्दै थियौं।
मैले फेरी हस्तमैथुनको कुरा निकाले। गरिस त मैले भनेको? छैन, उसले छोटोमा लजाउँदै जवाफ दिइ। गर्छेस् त? भो नगर्ने, त्यस्तो गर्न हुन्न। उसले भनी। उसको कामुकपन अनि उसबाट आइरहेको बास्ना, सेता तिघ्राले म नियन्त्रण गुमाउँदै थिए।
जरुक्क उठेर उसको दुध च्याप्पै समाते। उ हच्की। दाइ के गरेको भन्दै उ खाट बाट उठि। म पनि जरुक्क उठे।
नचलि बस् न। मज्जा हु्न्छ। यति भन्दा उ रातो भइसकेकी थिइ। मैले दुध अझै मज्जाले समाते। उसको दुधको माथी स‍-साना घमौरा जस्ता आकारका चिल्ला कोठी उसले घर बढार्दा देखेको थिए।
झोलिएका दुध टिसर्ट भित्रबाट देखेको मैले मौकाको फाइदा उठाउँदै थिए। उ हुन्न भन्दै चिच्याउन लागि। मैले उसलाई समातेर खाटमा सुताएँ। उ हुन्न हुन्न भन्दै चिच्चाउन लागि। मैले झटपट उसको टिसर्ट खोलिदिए। नानु तेरो बुबु कस्त्रो ठुलो रहेछ भन्दै बुबु मुसार्न थाले।
उ सिथिल भइसेकेकी थिइ। उसको पुतिमा हात घुसारे। उ राती भएकी थिइ। दाइ, दाइ भनेर बोलाउन थाली। नानु, तिम्रो पुति चिप्लो भएछ, के निकालेको तिमीले भनेपछि दाइ मलाई चिक्न मन छ पो भनि। मलाई के चाहियो र, मेरी सेक्सी बहिनीको जिब्रोलाई मेरो जिब्रोले चिक्न थाले।
उसलाई खाटमा सुताएको थिएँ। उ माथी म लम्पसार परेर सुत्दै किस गर्दै थिए। लाडो ठन्केको थियो। उसको जाघंमा लाडो अडेको थियो। नानु हातले मेरो लाडो चलाउ न, मैले भनेसंगै उसका कोमल हातले मेरो लाडोमा स्पर्स गर्यो। उ तर्सी, दाइ कत्रो ठुलो!
मैले उसको कट्टु खोले, पुतिमा जिब्रोले मस्त चलाए। उ आ… अ… गर्न थाली। भर्खर जवानी छाएकी बहिनीको पुतिलाई जिब्रोले चलाउँदा उ आखाँ चिम्म गरेर मजा लिदै थिए। पानी पानी भइ।
उसको पुतिको पानी खाने त सपना नै थियो, जुन पुरा हुँदै थियो। निकै बेर सम्म पुतिमा जब्रोले खेलाएपछि उ सिथिल भइसकेकी थिइ। नानु तिम्रो पुति चिकम त? दाइ छिटो छिटो, उसको जवाफ संगै लाडो पुतिमा छिराउन खोजे। मरे छिरेन। बलै जोड लगाए, ऐया दुख्यो, दाइ दुख्यो। उ जोडले चिच्याउन थाली।
भो नगर्ने, उ उठ्न खोजी। मेरो होस गुमिसकेको थियो। नकराइ बस, अब चिकेर मात्र छोड्छु। मैले भनेसंगै दुखाइले उ रुन लागि।
दाइ, नगर्ने के। उसको कपाल समाते अनि लाडो पुति भित्र हाल्न कोसिस गर्न थाले। उ रुदै थिइ। उसलाई दुध मुसारे, मज्जाले समाते, ओठ चुसे अनि पुति भित्र लाडो हाले।
मेरी १४ वर्षे भर्जिन बहिनीको पुतिको दुलो सानो भएकाले उ दुखाइले कराउँदै थिए। भो, दुख्यो दुख्यो। उ खाटमा छटपटाउन थाली। तपाई चिकेर मात्र छोड्छु, दुधका पोखा देखाउँदै मेरो लाडो ठन्काउँथिस्, अब चिकेसी मात्र छोड्छु भन्दै पुति भित्र ल्वात् ल्वात गर्न थाले।
उ उठ्न खोजी, कपाल समातेर खाटमा पछारे। दाइ, म ममीलाई भन्दिन्छु। उ दुखाइले गर्दा बार्गेनिङ गर्न थाली। भन, तेरो ममीको पुति झन् मिठो होला, तिघ्रा देखाउँदै बाहिरै नुहाँदा मैले हरेर छोलेको छु। भन्दै उसको दुखाइको पर्वाह नगरि चिक्न थाले।
उ लगातार ऐया ऐया गर्दै थिइ। केही बेर पछि उसको दुखाइ कम भएछ क्यारे छटपटाउन छाडी। मजाले चिके। निकै बेर पछि उसको पुतिबाट लाडो निकाले। उ थाकेकी थिइ। दुधको मुन्टा ठन्किएको थियो। पुति रातो अनि पानी पानी भएको थियो।
अहिले मज्जा भयो? अँ, अन्तमा उसले भनि। त्यसपछि मेरो सेक्सी बहिनासंग दिन दिनै जस्तो चिकीचिकी हुन थाल्यो।
bahini lai chikda, bahini lai chikeko, meri sexy bahini, sexy bahini lai chikda, sexy bahini lai chikeko
Cute north indian girl with lover